Company Profile President si oration Enterprise Culture Naa Asambodo Brand Story Cooperative Mode Foto orylọ Ọrụ Video Introduction Staff Activities Song nke KTC
Interactive Ewepụghị Panel CCTV Nyochaa Commercial TV Digital signage Professional Nyochaa
Endoscopic ịwa ahụ Display
PACS Ngosiputa Ngosiputa
Alo Display Center
Ngosipụta onyonyo Ultrasound
Hand-buuru ọrịa Ultrasound
ikanam TV Commercial Ngosipụta Medical Ngosipụta
Nka na ụzụ Center
Okwu Mmalite ka R & D Dept.
Mgbe Sale Service Akwụkwọ ikike Okwu
Kpọtụrụ Ozi Bank Ozi alo & mkpesa Map (KTC Shenzhen) Maapụ (KTC Huizhou)
Shenzhen KTC Technology Group (dịrị gaba n'ime ebe kwuru na dị ka "KTC"), tọrọ ntọala na 1995 na headquartered na Shenzhen, specializes ke n'ichepụta nke ewepụghị panel ngosi ọnụ ngwaahịa. Ọ bụ otu n'ime ndị mbụ na-emepụta nke LCD Monitors, LCD TV, azụmahịa LCD ọnụ na ọgwụ na LCD ọnụ na China.
Ugbu a, ndị Group nwere ihe karịrị 6,000 ọrụ, na ọgụgụ isi n'ichepụta ụlọ ogige ntụrụndụ na Shenzhen na Huizhou, na a oké njọ n'ala ebe 400,000㎡. The Group tumadi mejupụtara Shenzhen KTC Technology Co., Ltd., Shenzhen KTC Commercial Display Technology Co., Ltd., Shenzhen KTC Intelligent Technology Co., Ltd., Shenzhen KTC Medical Solutions Co., Ltd., Huizhou KTC Technology Co. , Ltd., Hong Kong KTC Technology Co., Ltd., wdg
Always n'ịgbaso azụmahịa echiche nke "mejuputa Ike n'Ezi Management, na-elekwasị anya Quality na Service", KTC-agba mbọ ka enye elu-edu ngwaahịa na-eje ozi ahịa na ndị kasị elu ọkọlọtọ. Ọ na-ewusi quality usoro na gburugburu ebe obibi-echebe, ma guzosie ike mbụ na klas management usoro. KTC e gbaara n'okpuru SGS ISO9001: 2015 quality management usoro, SGS ISO14001: 2015 gburugburu ebe obibi management usoro, SGS ANSI / ESD S20.20-2014 electrostatic orùrù ọkọlọtọ, na Electronic Industry Usoro Omume (EICC), na mwekota nke informatization na ụlọ ọrụ mmepụta management usoro, wdg
Products nke KTC Group agafewo ọtụtụ anụ ụlọ na esenidụt certifications dị ka CCC, TCO03, OA, CB, FCC, Mankeumman, SASO, TUV, RoHS, Energy Star, na CECP. Ọzọkwa, KTC akpọrọ oké esịtidem management na eguzobewo ụda PDM, ERP, CRM, SCM na ọzọ management usoro.
Dị ka a na mba hi-tech enterprise na accredited technical R & D center na Shenzhen, KTC kpụrụ a ụda R & D usoro - KTC Technology Center, site n'elu iri afọ abụọ nke na-aga n'ihu ego na mmepe. Nke a center undertakes ozi maka isi na n'ihu-ọgwụgwụ technology nnyocha na mmepe, ọhụrụ ngwaahịa mmepe na ụlọ ọrụ nweta nkwalite. Ya R & D ije mejupụtara Structural, Ọdụdọ, Software, Optical, Technology na Product Ngalaba na Ule & Na Center, nke nwere ọtụtụ narị ọkachamara R & D injinia na elites si ewepụghị panel ngosi ọnụ ụlọ ọrụ. Onye ọ bụla R & D ngalaba n'okpuru Technology Center na-kenyere na ha na nwoke aga-eme, implements collaborative mmepe na-elu collaborative development management usoro (PDM usoro), na tracks na mmepe na-emekarị nke ulo oru technology. Ha R & D larịị na àgwà nnyocha ike n'usoro n'etiti ndị kasị mma na ndị ụlọ ọrụ.
Ilekọta ndị na mmepe nke ọ bụla na-arụ, KTC mere gbara ọkpụrụkpụ na isi obodo ọsọ ọsọ ka ọkà talent ọzụzụ, na na nguzobe nke ọkà ẹkesikpede ike management usoro, etc .; ọ nọgidere na-enhances ewu talent otu na-eme ka mgbalị dị ukwuu iji na-adọta ma na-azụ ihe ọkà anya, elu-caliber na ndị technical ọkachamara. Site KTC University, ọhụrụ ọrụ mentorship program, ọhụrụ backbones program, esịtidem trainers, mmasị otu, mpụga ọzụzụ na ndị ọzọ ọzụzụ omume, KTC enyere ọrụ na-aghọta ọrụ atụmatụ na onwe-mma, na-agba ume ọkachamara nraranye, nkà ọganihu, na ọhụrụ na creativity. KTC na-asọpụrụ ndị "omenkà Training Model Company na Shenzhen" na "kasị pụta ìhè Enterprise na Social Ibu Ọrụ Mmezu".
Ebe ọ bụ na KTC banyere ubi nke PC Monitors na n'oge 1990s, ọ na-e-eme n'esepụghị aka mgbalị ịchụso elu mma site oru oma enterprise management, atọkwa nkà na ahaziri ọrụ, na-egosi oké ịsọ mpi na smart ewepụghị panel ngosi ubi. The Company e successively okpono dị ka "Top 100 Electronic Ozi Enterprises na China", "2008 Forbes CHINA 200 UP-NA-comers", "China si Top 10 Agba TV Export Company", "Top 500 Private Manufacturing Enterprises na China", " Top 100 Manufacturing Enterprises na Guangdong "," Top 100 Industrial Enterprises na Shenzhen "," Top 100 Independent Innovation Enterprises na Shenzhen "," Best ODM Suppliers nke Commercial LCD Equipment ", wdg, nke mere ka ezi na-elekọta mmadụ mmetụta na mmetụta.
KTC si smart ngwaahịa na-ere ka mba na n'ógbè ke South America, North America, Europe, Africa, Australia, na Asia. The Company eguzobewo a ufọk ufene sales netwọk na nọgidere na-enwe ezi ekwenye mmekọrịta na anụ ụlọ na mba a ma ama ụlọ ọrụ. N'ime ndị a afọ, KTC ka esorowo a zuru ezu na ụda usoro nke anụ ụlọ na esenidụt mgbe-sales ọrụ.
Dị ka ewepụghị panel ngosi abatakwa a ọhụrụ digital, ọgụgụ isi na netwọk dabeere oge, KTC na-ịgbasa ka smart TV, ọgwụ ngosipụta, azụmahịa ngosipụta na ndị ọzọ ubi site na-aga n'ihu ọhụrụ, isi technology rụpụtara, na ọrụ segmentation na customization. Ọ na-otu nke Top 100 Electronic Ozi Enterprises na China. Na otu nọọrọ onwe ha R & D usoro na nkà na ụzụ uru, ndị Company e nyere ikike ịbụ dị ka a mba hi-tech enterprise na a ọchịchị R & D center na Shenzhen. Ọ bụkwa ọrụ na ịgagharị ọhụrụ ahịa na ụdị na-na-eke ọhụrụ chọrọ. Dabere na differentiated na ahaziri ngwaahịa na ọrụ, ọ na-agbalịsi ike na-emeghe ọhụrụ atụmanya sales ibu na ewu na mgbe niile mma ọgụgụ isi n'ichepụta usoro na ngwaahịa ezinụlọ, si otú dina a ntọala maka otu ebe ụlọọrụ development.
Na-ele anya ọdịnihu, KTC ga, na a ọhụrụ image na n'ịgbaso ọrụ echiche nke "Ahịa Mbụ na-emepụtakwa n'Anya", nọgidere welie ya ike na-achọpụta ihe ọhụrụ mmepe, na igosi na mma ya nwere ọgụgụ isi n'ichepụta usoro, si otú ahụ na-enye ndị ahịa na-elu -quality smart ngosi ngwaahịa na ngwọta. Na echiche nke "Technology mma anyị Life", na Company na-eje n'ebe a buru ibu n'ọtụtụ na a elu, na-agbalịsi ghọọ a ụwa-klas ọkachamara emeputa nke smart ewepụghị panel ngosi ngwaahịa.
Ngosipụta Azụmaahịa KTC
Mma Living Ọnọdụ na Technology
Copyright © 2019 Shenzhen KTC Technology Group Ikike niile echekwabara.
E-mail Site Map Usoro ojiji na iwu nzuzo
-Arụ ọrụ ụbọchị:
Monday ka Friday